EyeNkanga 2018 | Gcina A Isitimela
Inyanga: EyeNkanga 2018
ekhaya > EyeNkanga 2018
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Kukho into emangalisayo ezalisekisa ngayo cwaka beqwalasele phandle i window kaloliwe, musa ukuba? ke, ekhohlwa frisks zokhuseleko lamakholwane, iingxowa Ziplock ezicacileyo ulwelo, zero nemfihlo iibhasi yangasese-ngaphantsi. Akukho ndlela engcono ukuba ukuhlola eYurophu kunokuba ngololiwe ngoDisemba. Apha zi…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Mhlawumbi ukhe weva nxazonke, kodwa awuzange uyikholelwe. Iintetho zokutya okumnandi koololiwe, Awukude kangako nenyaniso- ungonwabela konke ukuluma kwisidlo sakho sikaloliwe! Abafana namantombazana, Imizila kaloliwe yokuhambisa ukutya okumnandi ayisiyiyo…
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ngaba ufuna kutyelela Norway? iindwendwe kakhulu eYurophu ukufumana umdla uloliwe ubumnandi kangaka. Ngaba uyasazi isizathu sokuba? Oku kwenza ukuba nembono ephangaleleyo, kukusa weDreamland zehlabathi lokwenene. Cinga apha zezinye zezinto ekufuneka uzazi ngelixa…